i-ecommerce Archives-Funda ukuRhweba
Thenga i-PayPal kwivenkile kunye namandla e-crypto avelayo
Ngokuya kwi-intanethi kungabonakali mqondiso wokucotha, i-PayPal isuka kumandla iye kumandla, igweba ngeziphumo zayo zekota yokuqala.
Ingeniso yesabelo ngasinye se-1.22 yeedola yayingaphezulu komlindeli wolindelo lwe- $ 1.01, ngelixa ingeniso yangena kancinci ngaphambi koqikelelo kwi-60.3 yezigidigidi zeedola, ethelekisa i-Wall Street's $ 59 yezigidigidi.
Ngeli xesha, i-net inzuzo ikhuphe i-1,206% emangalisayo, ukusuka kwi-84 yezigidi zeedola ngo-2020 ukuya kwi-1.1 yezigidigidi zeedola kwikota yokuqala ye-2021.
I-PayPal yongeze abasebenzisi abatsha kwikliphu enomdla nayo. Abasebenzisi abatsha abasebenzayo baxhume nge-14.5 yezigidi, oko kuthetha ukuba inkampani ngoku inesiseko sabasebenzisi abangama-392 yezigidi.
Ibonakalisa ukuthandwa kwayo okukhulayo ngabathengi bathenga kwi-Intanethi, inani elipheleleyo lokuhlawula liphezulu ngama-50% kwi-285 yezigidi zeedola xa kuthelekiswa ne- $ 265 yezigidigidi ekupheleni kwekota enye kunyaka ophelileyo.
Akumangalisi ukuba mhlawumbi, i-PayPal iphakamisa isikhokelo sayo semali ye-2021.
Iiprojekthi zenkampani i-EPS kwi-Q2 ye- $ 1.12 ngesabelo ngasinye kunye neengeniso ze- $ 6.25 yezigidigidi- yinto ebethelwa kwimigca esezantsi kunye ephezulu, kubahlalutyi bebeqikelele ngaphambili i-1.10 kunye ne-6.16 yezigidigidi ngokulandelelana.
Kunyaka opheleleyo i-PayPal ilindele ukuba kuthengiswe i-25.75 yezigidigidi zeedola, iphinde ibuye ngaphezulu kokulindelweyo, ibe zizigidi ezingama-40 zeedola ngaphezulu kwe-25.71 yezigidigidi zeerandi. I-EPS iqikelelwa kwi- $ 4.70, ibetha i-4.57 yeedola ebhalwe ngabahlalutyi baseWall Street.
Ethetha ngeziphumo zengeniso uJohn Rainey, igosa eliyintloko lezezimali kwaPayPal, uthe: “Iziphumo zethu zekota yokuqala ezaphula irekhodi zigxininisa ukomelela okuqhubekayo, ukwahluka, kunye nokufaneleka kweqonga lethu leentlawulo ezisecaleni, elinamacala amabini. Siphakamisa isikhokelo sethu se-FY'21 ngokusekwe kwezi ziphumo zomeleleyo. ”
PayPal 1-usuku amakhandlela premarket 7 UCanzibe 2021. Ngokunyanisekileyo TradingView
Ngokucacileyo intsebenzo eyomeleleyo ngePayPal iqhutywa yinto ekhangeleka inyuka njengokutshintsha komjikelo kwimikhwa yokuthenga.
Okwangoku, akukho phawu lincinci lokukhuphisana kweedigital yedijithali evala isikhewu ngePayPal. Ifemu inezinto ezincinci zentlawulo, kubandakanya iVenmo, iXoom, iNyosi, iBraintree kunye neZettle.
Inkampani ihambile ngendlela ukusukela oko yaphuma kwintsebenzo ye-eBay, apho yayiluloliwe ongaphakathi endlwini wentengiso ye-intanethi.
I-PayPal ibonwa njengefanelekileyo, ikhuselekile… kwaye ishushu kwi-crypto nayo
Amanqaku e-PayPal kakhulu kunye nabathengi bayo ukulungiselela ukulungeleka kunye nokukhuseleka. Ngokwandayo abathengi abaninzi bakhetha ukucofa iqhosha ukuze bathenge nge-PayPal ngaphezulu kokunikezela ngeenkcukacha zebhanki zabo kubathengisi abakwi-Intanethi.
Umhlalutyi kaMorgan Stanley uJames Faucette naye wayechukumisekile yindlela inkampani eqhubeka nokuhlawula iindleko.
“Sikwakhuthazekile ukuba inqanaba lenkcitho yentengiselwano ephantsi inezinto ezinokubangela isiseko esisezantsi senkampani, ngakumbi njengegalelo elonyukayo kwiintlawulo zamatyala, ukugcinwa kwemali kwiqonga, njlnjl. Okokugqibela, sicinga ukuba abanini zabelo bexesha elide kufuneka bonwabe kukuba i-PayPal ibuyela umva kutyalo-mali olongezelelweyo. ”
Ifomathi iphinde yaphinda isitokhwe njengokuthenga okuqinileyo, ikhupha ixabiso elitsha ekujoliswe kulo kwi-PayPal ye- $ 337 ngesabelo ngasinye, ukusuka kwi- $ 329 ngaphambili.
Ukuthathelwa ingqalelo kwesicwangciso esiliqili kolo tyalo-mali longezelelekileyo yikhompyuter.
Umphathi omkhulu uDan Schulman uqaphele ukuba intengiso ye-PayPal iyaqhubeka nokukhula kwaye wayenomdla ngakumbi malunga nenxalenye ye-crypto yelo bali.
UShulman uthe: "Sineziphumo ezincumisayo kakhulu ezenzeka ngobuchule kwiinzame zethu ze-crypto."
Kwangoko kulo nyaka i-PayPal yaqala ukuvumela abathengi base-US ukuba bathenge i-bitcoin kunye nezinye izinto ezihamba phambili kodwa kwakungekho ukuphela kuka-Matshi apho yavula khona inkonzo yentengiselwano ukuvumela abantu ukuba babhatale iimpahla kunye neenkonzo nge-bitcoin. I-Crypto ayikasetyenziswa kangako njengendlela yokutshintshiselana kwezorhwebo kwaye ihlala ithengwa ikakhulu njengotyalo mali.
Malunga nesiqingatha sabasebenzisi be-crypto kwi-PayPal jonga i-app yonke imihla nenqanaba elikhuthazayo lokuzibandakanya kwabasebenzisi. Ubungakanani beenjongo zayo ze-crypto zatyhilwa, kunye ne-CEO ikhankanya iingxoxo kunye "neebhanki eziphambili, abalawuli kunye namagosa aseburhulumenteni kwihlabathi liphela".
Ubume bolawulo lwe-crypto luyaphucuka kwaye inkampani ikwenze kwacaca ukuba izicwangciso zayo ziya kuphuhliswa zilandelwe "ngentsebenziswano noorhulumente kunye nokuthobela imigaqo-nkqubo yommandla, yelizwe kunye nehlabathi".
Imvumelwano yabahlalutyi abangama-26 abagubungela isitokhwe kwiWall Street yeyokujolisa kumaxabiso kwiinyanga ezili-12 (PT) yi- $ 320. Oko kubonisa i-27% ephezulu kwixabiso lokuvala izolo le- $ 252. Eyona PT iphezulu yi- $ 375 kwaye eyona iphantsi $ 270.00.
I-TipRanks eneenkwenkwezi ezintlanu ezilinganise umhlalutyi u-Timothy Chiodo kwi-Credit Suisse, ngenqanaba lempumelelo le-69% kunye ne-avareji yokubuya kwe-35%, unyuse ixabiso lakhe ekujolise kulo kwi-PayPal ukuya kwi-315 yeedola ukusuka kwi-310 yeedola ngaphambili, ukugcina ukulinganiswa okungaphaya kwezabelo ekukhanyeni yeziphumo zekota eziqinileyo.
Silinganisela i-PayPal ukuthenga kwexesha elide.
Ungathenga i-PayPal nge-0% yekhomishini kwiqonga lotyalo-mali lehlabathi eToro.
tags eCommerce, izitokhwe zemali, intlawulo, PAYPAL